Itoobiya oo looga adkaaday Soomaaliya kana digtey in la doorto madaxwyne ka soo jeeda beesha Majeerteen. – Radio Daljir
Itoobiya oo looga adkaaday Soomaaliya kana digtey in la doorto madaxwyne ka soo jeeda beesha Majeerteen.
Janaayo 18, 2017 11:17 g 0
Warbixin ay soo saartay Xarunta Wada-xaajoodka, Cilmi-baarista iyo Iskaashiga (The Centre for Dialogue, Research and Cooperation (CDRC) oo Xarunteeda Dhexe ku taallo Caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxa si qoto dheer looga hadlay Saadaasha Siyaasadda Somalia iyo Murashaxa noqon kara Madaxweynaha Mustaqbalka ee Somalia.
Warbixinta Bilaha ee CDRC oo Cinwaan looga dhigay Waxyaabaha ku hareeraysan Xilliga Kala-guurka Somalia ayaa waxaa lagu muujiyey Juqraafiyadda Siyaasadda ee Somalia iyo qaabka ugu suurto-galsan ee Awood-qeybsiga Somalia iyo Loolanka Beelaha ee Xilka Madaxtinimadda.
Warbixinta Xarunta Wada-xaajoodka, Cilmi-baarista iyo Iskaashiga (CDRC) ee Xarunteeda dhexe tahay magaalladda Addis Abeba waxaa si hoose loogu eegay Xifaltanka Beelaha waa weyn ee Somalia.
Qoraalka Cilmi-baarista ee Xarunta CDRC oo ka kooban 15 bog waxaa lagu xusay marka asaaska looga dhigo Taariikhda iyo Xaqiiqadaha haatan jira inay Dhaqaaq Caqli-gal ah u oggolaanayso inay Beelaha Hawiye sii hayaan Xilka Madaxweynaha Somalia.
Aqoonsiga dareenka sii kordhayo ee Hoggaaminka Abgaal ee gudaha Somalia, waxay taasi fursad siinaysaa inuusan qof aan Hawiye ahayn u muuqan karo inuu xalin karo mashaakilada is-biirsanayo.
Warbixinta Xarunta CDRC waxaa kaloo lagu muujiyey in loo baahan yahay in la fahmo dareenka ka jira Muqdisho ee tilmaamayo in Siyaasiyiinta Soomaalida ee aan ka soo jeedin Beelaha Hawiye yihiin marti, waa sida lagu qoray Warbixintaasi.
Waxa kaloo lagu soo qaatay inay u muuqato inay mararka qaarkood sii kordhayso haddii Hawiye laga qaado Madaxtinimadda, loona oggolaado Qabiil kale inu qabto Xilkaasi , gaar ahaan Qabiilka Majeerteen inay taasi u oggolaan doonto in Kooxaha sida Alshabaab inay Muqdisho ka dhigaan Goob lagu ciyaaro, oo ay Hawlaha Dowladda ka dhigayso mid aan suurto-gal ahayn in Habeen lagu sii shaqeeyo.
Warbixinta waxay xustay in Xilligii uu C/llaahi Yuusuf hayey Madaxtinimadda Somalia inay Alshabaab kordhiyeen dagaalkii ay ka wadeen Muqdisho.
Warbixinta waxay ka digtay inay taasi dib-u-dhac weyn ku noqon karto Dowladda iyo Ammaanka iyo xaqiijinta guulaha Somalia ee 10-kii sanno ee la soo dhaafay.
Warbixinta Xarunta Wada-xaajoodka, Cilmi-baarista iyo Iskaashiga (CDRC) ee Xarunteeda dhexe ku taallo magaalladda Addis Abeba waxaa kaloo lagu soo qaaday sida loogu baahan yahay Dalalka Gobalka inay aad u fahmaan cawaaqib-xumidda ka dhalan karta Siyaasadooda iyo inay garwaaqsadaan saamynta arrintaasi ee Somalia iyo guud ahaan Mandiqaddan.
Xarunta CDRC waxay kaloo dalalka Gobalka u bidhaamisay inaysan ku hodmin halkii ay Danahooda Gaarka ka eegan lahaayeen Siayasadda Somalia.
Warbixinta ayaa lagu xusay inay jiraan kuwo mucaaradsan Madaxweynaha haatan, isla markaana rujmeysan inuu Ra’isul-wasaaruhu ku guuleysan doono Xilakasi.
Bale ma jirto wax ballan qaad ah oo uu Ra’isul-wasaaruhu bixinayo, inkastoo uu galay Heshiis Hoosaas.
Sidoo kale, Warbixinta waxay qortay inay jiraan Isku-dayo muuqda ee kuwa ku sugan Gobalka ay ka shaqeynayaan inay Heshiis Iskaashi la galaan qeybo dibedda ka jooga Mandiqada, si Madaxweynaha haatan looga hor joogsado inaan mar kale la dooranin.
Baraarug kale ayaa jiray o ola doonayey Is-aham dhex mara Madaxweynaha iyo Ra’isul-wasaaraha, si ay ugu midoobaan Hadafka Guud iyo inay si wadajir ugu ololeeyaan inay ku guuleystaan Doorashadda soo socota iyo inay sii wadaan Dhismaha Hay’adaha iyo Nabadda Somalia.
Balse, dadaalkaasi waxaa laalay Ra’isul-wasaraaha oo isaga sheegay inuu shaqsi ahaan u tartamayo, si uu ugu guuleysto Xilka Madaxtinimadda, waa sida lagu xusay Warbixinta Hay’adda fadhigeedu yahay dalka Ethiopia.